काठमाडौं । तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादी मानव स्वास्थ्यका लागि घातक छ । तर विषादीको मात्रा के कति प्रयोग भएको भन्ने जाँच गर्ने संयन्त्र भरपर्दो छैन । आजको गोरखापत्र
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेका असंसदीय शब्द अभिलेखबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा
भद्रगोल कूटनीति : मन्त्रालयका अधिकारी लाइन लागेर किन जानुपर्यो ?
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले विदेशस्थित १० दूतावास र ८३ मुलुक हेर्दै आएको छ। अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अमेरिका, युरोपका सबै दूतावास यही महाशाखाअन्तर्गत पर्छन्। तर ती मुलुकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा
आजका पत्रिकामा छापिएका पाँच कार्टुन
आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट(२), नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर(कोशेली) र राजधानीमा छापिएको बासु क्षितिज, रवि मिश्र, वात्स्यायन र उत्तम नेपालको कार्टुन:
काठमाडौं । हैजा प्रमाणित भएको घरको पानीमा दिसामा हुने किटाणु ‘कोलिफर्म’ पर्याप्त रुपमा रहेको पाइएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारमा आएका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का
बुढीगण्डकीमा जलमाफिया : को हुन् हाइड्रोका ‘पप्पु’ भट्ट दाजुभाइ ?
काठमाडौं । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ  । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई
भारतमा राशन कार्ड, नेपालमा वृद्ध भत्ता
\_विराटनगर । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाका व्यापारी छगनलाल शर्माले नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएको छ । इनरुवा बजारमा सुरज फेन्सी स्टोर कपडा पसल सञ्चालन गरेर बसेका उनले ३४ वर्षको
बार अध्यक्षलाई न्यायपरिषद सदस्यले ‘तँलाई’देखाइदिन्छु भनेपछि…
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना ग‍र्यो । राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच
विदेशीलाई सेटिङमा भिषा
काठमाडौं । गैरकानुनी ढंगले नेपाल प्रवेश गरेका एक विदेशी नागरिकले रहस्यमय ढंगले त्रिवि अध्यागमन कार्यालयबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा) लिएको खुलेको छ। नेपालको भिसा नभएका रोमानियाका नागरिक अत्तिला इयुमस भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै